Surwaalka Hargaha - Dhammaan Noocyada Soo Noqonaya Dayrta | Bezzia
Dhammaan noocyada surwaalka maqaarku waxay u soo noqdaan dayrta
Susana godoy | 08/10/2021 10:07 | Isbeddellada
Surwaalku waa mid ka mid ah dharka xiddigaha cusub waana ognahay. Waa run in marka ay timaado qabow, marooyinku sidoo kale way isbedelaan si ay u awoodaan inaynu isku diirino sidaan rabno. Laakiin waxaa jira mid aan si dhab ah isu beddelin sababtoo ah xilli ciyaareed kasta wuu nala soo noqdaa waana ku faraxsanahay arrintaas: Surwaalka haragga.
Waxaa loo meeleeyay sidii mid ka mid ah dharkaas lagama maarmaanka ah maxaa yeelay waxaan abuuri doonaa dhammaan noocyada iyo qaababka. Si aan ula soconno waqtiyada ugu wanaagsan ee maalinta laakiin sidoo kale habeenka. Markaa, waxaan aragnaa inay tahay dhar xiddigle ah oo hadda ay tahay inaan la jaanqaadno nolosheenna oo keliya. Miyaan bilownaa?
1 Surwaal harag ah oo toos loo gooyay
2 Surwaalka lugaha maqaar -beenaadka ah
3 Surwaal ballaaran oo midab leh
Surwaal harag ah oo toos loo gooyay
Waxaa jira dhowr nooc oo surwaal ah oo aan leenahay marka la eego isbeddellada.. Sababtoo ah in kasta oo aan horeba u ogayn inaan jecel nahay natiijada marada noocan oo kale ahi ina siiso, haddana waa inaan aragnaa sidaan u xidhan karno iyo waqtiyada. Ma noqon doonto wax dhib badan dhammaan xulashooyinka ay dukaamada moodada mar hore na siiyaan. Sidaa darteed, dukaamada sida Zara ayaa had iyo jeer ka mid ah kuwa ugu horreeya ee doorta inay had iyo jeer na tusaan kan ugu fiican oo kiiskan waa surwaal toosan.
Ma aha mid aad u adag sida aan malayn karno laakiin leh goyn aad u raaxo badan oo kuu oggolaanaysa inaad ku raaxaysato dhammaystirka maalinta iyo daqiiqadaha ugu gaarka ah. Dhexda sare waa mid kale oo ka mid ah guulaha waaweyn si aan u awoodno inaan gaarno raaxada aan u baahannahay. Sidaa darteed, dhinac ahaan, waa dhammaadka ugu guulaha badan xilli ciyaareedkan. Laakiin dhinaca kale, sidoo kale kuwa leh furitaanka anqawga iyo kuwa nooga taga faahfaahinta tollada ama darbiyada si fiican u calaamadsan aagga hore. Tani waxay ku siin doontaa xarrago badan xafiisyadaas, tusaale ahaan.
Surwaalka lugaha maqaar -beenaadka ah
Shaki la'aan, had iyo jeer waxaa jiri doona qaab na sugaya oo sidaas oo kale, lugaynta ayaa noqon doonta tan ugu qaalisan. Sababtoo ah haddii aan ka fikirno, waxaa lagu dari doonaa muuqaallo kala duwan laakiin dhammaantood waa kuwa ugu raaxada badan. Waxaad dooran kartaa inaad ku darto jaakad iyo blouse, oo labadoodaba la xirto xilli ciyaareedkan. Ama, la joog funaanad ballaadhan oo dheer oo dabooli karta qayb ka mid ah jirkaaga. Leggings ayaa sidoo kale lagu arki karaa kabaha ama kabaha canqowga iyo sidoo kale kabaha isboortiga. Taasi waa, iyada oo ku xidhan dharka sare ee aad doorato, waxaad isugu dari kartaa sidaad jeceshahay.
Surwaal ballaaran oo midab leh
Waxaan hore u haysannay laba-iyo-hal, maxaa yeelay in kasta oo saamaynta maqaarkii hore lagu arki jiray midabka madow, haddana way isbeddeshay. Markaa had iyo jeer way fiican tahay inaad awoodo ku raaxayso sheekooyinka cusub iyo muuqaalka qurxoon. Inkasta oo midabka madaw nagu dari karo dhammaan kuwa kale, haddana dhinac uma dayn karno midabada qaarkood sida casaanka. Sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay midda ugu xamaasadda badan iyo inay xoog siin doonaan jiilaalka. Sidaa darteed waa inay mar walba nala joogto. Dabcan, ka hadlida hooska, codadka bunni waa kuwa kale ee aasaasiga u ah xilligan cusub.
Markaa, hadda waxaad kala dooran kartaa midabka aasaasiga ah ee madow, casaan, bunni hubaal waxaad kaloo heli doontaa cagaar aan caadi ahayn. Dhammaantood waxay ahaan doonaan dhinacaaga si ay kuu siiyaan qaababka ugu wanaagsan. Xaaladdan waxaan ku harsan nahay surwaal sare oo dhexda leh waxaa dheer in aad leedahay lug ballaaran. Waxay u muuqataa in fikradda waqtiyo kale ay soo noqoto si ay u degto isbeddellada maanta. Sidaa darteed, ma noqon kartid surwaal maqaar ah, meel kasta oo aad eegto. Ma dharkaagii xiddigga ee xilli -ciyaareedka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Isbeddellada » Dhammaan noocyada surwaalka maqaarku waxay u soo noqdaan dayrta
3 talooyin si aad uga goyso moobiilkaaga
Waa maxay jacaylka niyadjabka?